भगवान जस्ता श्रीमान ! श्रीमतीका लागि घरलाई अस्पताल बनाए, कोठालाई आइसीयू र कारलाई एम्बुलेन्स – AB Sansar
October 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on भगवान जस्ता श्रीमान ! श्रीमतीका लागि घरलाई अस्पताल बनाए, कोठालाई आइसीयू र कारलाई एम्बुलेन्स
काठमाडौ । नेपालीमा एउटा उखान छ । १२ भाई १३ नाती बुढाको थोक्रो काँध माथि । सन्तानले जति डाँडाकाँडा ढाकेपनि आफ्नो दुख आफैसंग हुन्छ । अहिले भारतमा एक वृद्धको अवस्था त्यस्तै भएको छ । उनका परिवारले विश्वका धेरै ठाउँ ढाकेका छन् । तर ७४ वर्षका वृद्धका लागि सहारा भनेको आफ्नो श्रीमती मात्र छन् ।
७४ वर्षका श्रीमानले आफ्नो ७२ वर्षको श्रीमतीका लागि गरेको योगदानले अहिले विश्वमा चर्चा भएको छ ।७४ वर्षका प्रकाशले ७२ वर्षकी श्रीमतीका लागि घरनै अस्पताल बनाइदिएका छन् । कोठालाई आइसियु बनाएर आफै उपचारमा जुटेका छन् । तर उनी चिकित्सक भने होइनन् । पेशाले इन्जिनियर भएपनि बाध्यताले अहिले चिकित्सकको काम गर्नुपरेको उनले बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, श्रीमतीलाई हरेक मिनेट चार लिटर अक्सिजन चाहिन्छ, हरेक हप्ता २ सिलिन्डर किन्छु, कोरोनाको समयमा समस्या भएपछि त्यसका लागि पनि प्रहरीको सहयोग लिनुपरेको थियो ।उनको नाम ज्ञान प्रकाश हो, मध्य प्रदेशको जबलपुरमा बस्ने उनी चार बर्षदेखि श्रीमतीको उपचारमा छन् ।
श्रीमती विरामी भएर बारम्बार अस्पताल जानुपर्‍यो, त्यो सम्भव नभएपछि उनले आफ्नो घरलाई अस्पतालमा परिणत गरे ।ज्ञानकी श्रीमती कुमुदिनी श्रीवास्तव ७२ बर्षकी छन् । ज्ञान भन्छन् कि मेरी श्रीमती गत चार वर्षदेखि दमको समस्याबाट पीडित छिन्। धेरै चोटि उनी अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेको थियो र केही दिन पछि उनी डिस्चार्ज भइन्। यो प्रक्रिया विगत चार बर्षमा लगातार चलेको थियो।
गत बर्ष सेप्टेम्बरमा मेरी श्रीमतीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न लाग्दा, मैले त्यो भन्दा पहिले अस्पतालको सम्पूर्ण सेटअप मेरो घरमा तयार गरें। पहिले अक्सिजन पाइपलाइन फिटिंग गरे। त्यसपछि एउटा कोठालाई आईसीयूमा रूपान्तरण गरियो। योसँग सक्सन मेशीन, नेबुलाइजर, एयर प्यूरिफायर र भेंटिलेटर पनि छ। केही दिन पछि पत्नीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो र घरमा ल्याइयो
ज्ञानले आफ्नो कारमा अक्सिजन फिटिंगसहितको सिलिन्डर राखेका छन् र कारलाई पूर्ण रूपमा एम्बुलेन्स बनाएका छन् । जब उनीहरूले आफ्नी पत्नीलाई आपतकालमा अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्दछ, तिनीहरू यसमार्फत जान्छन्।ज्ञान भन्छन् कि बिरामीलाई अस्पतालबाट रोग सर्छ हुन्छ, तर यो घरमा त्यस्तो हुँदैन।
हो, कहिलेकाहिँ आपतकालमा अस्पतालमा जानुपर्दछ, तर अब उनी अस्पतालमा भन्दा आफ्नी श्रीमतीको घरमै हेरचाह गर्न सक्षम छन्।श्रीमतीलाई प्रति मिनेट चार लिटर अक्सिजन चाहिन्छ। हामी प्रत्येक हप्ता २ सिलिन्डर अक्सिजन ल्याउँछन् । एक बर्ष देखि यहि क्रम चलिरहेको छ । अब कोरोना युगमा केही समस्या भएको थियो,
त्यसपछि कलेक्टरले एसपीलाई आवेदन दिए, त्यसपछि उनले तुरून्त आपूर्तिकर्तालाई बोलाए र हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरे।ज्ञान भन्छिन् कि श्रीमती सु त्ने बेलादेखि नै उनको तालिका पनि परिवर्तन भएको छ। अब बिहान ऊ उठ्छ र आफ्नी पत्नीलाई पहिले तातो पानी पिउन दिन्छन् र आफै पिउँछ।
त्यसपछि भाँडोमा नै पत्नीलाई शौचालय बनाइदिन्छन् । त्यसपछि दुबैको लागि चिया बनाउँछन् अक्सिजन आपूर्ति निगरानी पनि गर्छन । श्रीमतीको छेउमा बसेर ट्याबमा फेसबुक, ट्विटर यूट्यूब पनि चलाउँछन् । त्यसमा आएका समाचार श्रीमतीलाई सुनाउँछन् ।
कोरोनासंग लडिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले भावुक हुँदै लेखे यस्तो स्टाटस !
आदर्श मिश्राले रुँदै भने, ‘बुढा बितेकी एउटी महिला (मेरी आमा) लाई ‘तेरो श्रीमानको उपचार हुन्छ’ भनेर सिधै श्मशान घाट लगेँ’
ट्राफिक चेकिङको लापरबाहीका कारण स्कुटर चालक सृजना राईको दुर्घटनामा मृ’त्यु
February 22, 2021 February 22, 2021 Ab-संसार